कस्तो अचम्म ! श्रीमान-श्रीमति नै मृ’त फेला, बिचरा कलिली छोरीको यस्तो बिजोग! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > कस्तो अचम्म ! श्रीमान-श्रीमति नै मृ’त फेला, बिचरा कलिली छोरीको यस्तो बिजोग! (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 15, 2021 भिडियो, समाज	0
बिराटनगर । भनिन्छ, मृ’त्यु अ’निश्चित छ । कहाँ, कतिबेला, कसरी मानिसको मृ’त्यु हुन्छ ? यसको उत्तर सायदै नभेटिएला । कुनै मृ’त्यु यस्तो पनि हुन्छ कि, कहिल्यै न’सोचेको क’हा’ली’ला’ग्दो । इटहरीमा शनिबार यस्तै क’हालीलाग्दो घ’ट’ना भएको छ । शनिबार बिहान इटहरी २० तरहरामा श्रीमान श्रीमती मृ’त फे’ला प’रेका छन् । इटहरी १९ र २० मा पर्ने खा’र्साला खोलामा श्रीमान, श्रीमती नै मृ’त फेला परेका हुन् ।
इटहरी २० का वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठका अनुसार उदयपुरको रौता गाउँपालिका ३ मजौ घर भइ हाल तरहरामा कोठाभाडामा बस्दै आएका २५ वर्षीय हेमशेर राई र २२ वर्षीया शर्मिला राई मृ’त फे’ला प’रे’का हुन् । ‘रातको अन्दाजी ११ बजे स्थानीय खार्साला खोलामा माछा मार्न जाने क्रममा क’रे’न्ट लागेको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्षीया छोरीलाई सु’ताएर राति खोलामा क’रे’न्ट लगाइ माछा मा’र्न जाँ’दा क’रे’न्ट लागेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनु’सन्धानबाट खुलेको छ ।’
उनका अनुसार शर्मिलाको शरीरमा क’रे’न्ट लागेर नीलडाम छ । मजदुरी गर्दै आएका उनीहरुका तीन वर्षीया छोरी छन् । मा’छा मा’र्न जाँदा बिजुलीको तारबाट क’रे’न्ट ला’गेको हु’नसक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार यहाँको रोयल फर्निचरमा करीब दुई वर्ष अगाडिदेखि काठ ‘मिस्त्री’ को काम गर्दै आएका उनीहरु शुक्रबार अबेलासम्म सु’तेका थिएनन् ।
रातको १२ बजेतिर छोरी रुएपछि ब्यूँ’झिएका स्थानीयले छोरीलाई कोठामा एक्लै भेटेका थिए । तर, रातको समय भएकाले खोजी नगरिएको र यतै कतै होलान् भनेर वास्ता नगरिएको घ’ट’ना’स्थ’ल’मा भे’टिएका एक स्थानीयले बताए । तर, शनिबार बिहान साढे ५ बजे स्थानीय खोलामा मृ’त भेटिएपछि प्रहरीमा खबर गरिएको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव कुमार कटवालका अनुसार एकैठाउँ मृ’त भेटिएका हेमशेरको शव उत्तरपट्टी र शर्मिलाको दक्षिणपट्टी फे’ला परेको थियो । घ’ट’ना’स्थलमा प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितले मुचुल्का उठाएर उनीहरुको श’व पोष्टमार्टमका लागि धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान पठाइएको कटवालले जनाकारी दिए ।
‘रातको समयमा मा’छा मा’र्ने क्रममा क’रे’न्ट लागेर मृ’त्यु भए’को हुनसक्ने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मृ’त’कका आफन्त उदयपुरका रहेकाले केटीको दाजुसँग सम्पर्क भएको छ ।’ उनका अनुसार मृ’त’क’का आफन्त उदयपुरको रौता ३ मजौमा रहेकाले मृ’त’क शर्मिलाका दाजुसँग सम्पर्क भएको छ । घ’ट’नाबारे थप अनु’सन्धान गरिरहेको प्र’हरीले जनाएको छ ।
विहे गरेका भाइरल अघोर बाबा धुरुधुरु रुदै मिडियामा! के भएछ त्यस्तो? (पुरा भिडियो)